धेरै विल उठेपछि मालिकसँग बदला लिन भक्तपुरको होटलमा यस्तो घटना? अभियुक्तले दिएको बयान सुनेर सबै चकित! – List Khabar
Home / रोचक / धेरै विल उठेपछि मालिकसँग बदला लिन भक्तपुरको होटलमा यस्तो घटना? अभियुक्तले दिएको बयान सुनेर सबै चकित!
धेरै विल उठेपछि मालिकसँग बदला लिन भक्तपुरको होटलमा यस्तो घटना? अभियुक्तले दिएको बयान सुनेर सबै चकित!
admin August 22, 2021 रोचक Leaveacomment 145 Views
होटलमा धेरै विल उठ्यो भने मानिसले के गर्लान्? होटल मालिकसँग कुरा गर्लान्, केहीले बढि नै भए प्रहरीलाई खबर गर्लाल् । तर भक्तपुरमा एक जनाले भने होटल मालिकलाई तर्साउन कुकर राखिदिएका छन् । उक्त कुकरलाई ब म सम्झेर होटल मालिक भने डराएका छन् ।
यसअघि शंकास्पद बस्तु फेला परेको भन्दै त्यहा हेर्नेहरुको भीड बढेको थियो । शंखधर चोकबाट भित्र रहेको गेष्ट हाउसको कोठामा शंकास्पद रुपमा तार जोडेको अवस्थामा ‘प्रेसर कुकर’ फेला परेको महानगरीय प्रहरी वृत ठिमीका डिएसपी नरहरि रेग्मीले जानकारी दिएका थिए । घटनास्थलमा नेपाली सेनाको डि स्पो जल टोली पुगेको थियो । शंकास्पद अवस्थामा कुकर फेला परेको कोठामा ३ दिनदेखि पाहुना नबसेको होटल सञ्चालकले जानकारी दिएका थिए ।
शनिवार बिहान सवा १२ बजे होटल सञ्चालक जाँदा शंकास्पद बस्तु नदेखिएको तर, साँझ तार जोडेको अवस्थामा कुकर देखेपछि गेष्ट हाउसका कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
Previous कुन महिनामा जन्मिएका मान्छे हुन्छन् कति भाग्यमानी ?
Next भनेकै समयमा ग’र्भ बस्नका लागि यो समयमा यौ’न सम्पर्क गर्नुपर्छ : डा. सबिना सिम्खडा